Miteraka Fanontaniana Vaovao Momba Ny Fanafihana Natao Ny AMIA Ny Nahafatesan’ilay Mpampanoa Lalàna Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2015 13:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, čeština , македонски, polski, Deutsch, Español
Sady manampy fanontaniana hafa indray no hamela tsy hisy valiny ny raharaham-panafihana nanjo ny foiben-toeran'ny tranom-pifankatiavana Israely-Arzantina (AMIA) tamin'ny 1994 tao Buenos Aires, ny nahafatesan'i Alberto Nisman, ilay mpampanoa lalàna niandraikitra iny raharaha iny.
Damián Patcher, tao amin'ny kaontiny Twitter, no voalohany nanambara ny vaovao :
Andro vitsy taorian'izay dia nandao an'i Arzantina i Patcher “noho ny fahatahorany ny amin'ny ainy” ary any Israely izy ankehitriny. Nahatohina ny rehetra ny fahafatesana tsy nampoizin'ny maro nanjo an'ilay mpitsara, araka ny asehon'ity sarintany Twitter ity :
Tsy ela dia tonga ireo sahoan-dresaka sy vinavina, famonoantena sa vono olona, eny fa na ny fifanakalozana teo amin'ny governemanta sy ny mpanohitra aza :
Nandainga ve i Berni, i @CFKArgentina sa izy roa mihitsy no nandainga? Iza no nampilaza an'i CFK? Tamin'ny firy ora ilay mpitsara no tonga?
Raha ny tenin'ireo manampahefana ao Arzantina no raisina dia hoe namono tena i Nisman, 51 taona, ora vitsy taloha kelin'ny tokony nijoroany teo anoloan'ny Kaongresy hanolotra ny fiampangàny ny filoha Cristina Fernández de Kirchner, izay nampangainy ho nanao fifanarahana miafina tamin'i Iran mba hiarovana irao voalaza ho tompon'antoka tamin'ilay fanafihana nahafatesana olona 85 sy naharatràna 300 hafa.
Ny marainan'ny 18 jolay1994, zava-mipoaka nilanja 300 kg teo ho eo no nipoaka teo alohan'ny tranoben'ny AMIA. Ny fikarohana niarahan'ny fitsaràna tao Arzantina sy ireo fikambanana iraisampirenena dia nahafahana namantatra fa ireo mpiasam-panjakana ambony tao Iran miara-miasa amin'ny vondrona Libaney Hezbolá no mety tao ambadik'io fanafihana io.
Tamin'ny 2013, nanao sonia fifanarahana iray i Arzantina sy Iran, ny ” Fifanaraham-piarahamiasa“, ka tao anatin'izany no nananganana ny “kaomisionan'ny fahamarinana” hikaroka ny zava-nisy marina nitranga tamin'ny 1994. Tsy dia nankasitraka loatra an'io fifanarahana io ny vondrom-piarahamonin'ny Jiosy tao Arzantina, ny lehibe indrindra any Amerika Latina, saingy tsy fahombiazana izy iny noho izy tsy nankatoavin'ny antenimera rehefa naroson'ny governemanta Iraniana teo anatrehany, satria tsy nahazo velively ny fanohanan'ny filoha Mahmoud Ahmadinejad tamin'izany fotoana.
Ny hany olona voampanga tamin'iny raharaha iny dia i Carlos Telleldín, ilay mpivarotra tamin'ilay fiara “camionnette” voasesika zava-mipoaka, izay nanaovan'ny mpamiliny vy very ny ainy ka napoaka tamin'ny tranoben'ny AMIA. Saingy mbola miriaria hatrany ireo tena tomponandraikitra.